GS-3015CEG / GS-4020CEG Full Emechiela Fiber Laser Ịcha Machine na Exchange - China Dongguan Glorystar Laser
GS-3015CEG / GS-4020CEG Full Emechiela Fiber Laser Ịcha Machine na Exchange
Ọ nwere ike na bee akpa na mpempe akwụkwọ ihe onwunwe. Na na akpaaka mgbanwe table, ọ nwere ike ịzọpụta loading oge. Product Atụmatụ ● Na-na gburugburu ogige imewe, belata laser radieshon na zere ihe ọ bụla n'ibu mmerụ. ● adopts na exchangeable worktable ịzọpụta loading na ebutu oge, na chieve elu ọrụ arụmọrụ. ● High kpomkwem egweri gia na gia ogbe, ala ụzụ na elu kpọmkwem. Iche tube ọnwụ ngwaọrụ ọdabara ụlọ ọrụ ọtụtụ-eji nile di iche iche nke metal ngwaahịa ọrụ ...
Order ibu :: 1 Ibe
Ọ nwere ike na bee akpa na mpempe akwụkwọ ihe onwunwe. Na na akpaaka mgbanwe table, ọ nwere ike ịzọpụta loading oge.
● Na-na gburugburu ogige imewe, belata laser radieshon na zere ihe ọ bụla n'ibu mmerụ.
● adopts na exchangeable worktable ịzọpụta loading na ebutu oge, na chieve elu ọrụ arụmọrụ.
● High kpomkwem egweri gia na gia ogbe, ala ụzụ na elu kpọmkwem.
Iche tube ọnwụ ngwaọrụ
Ọtụtụ-eji nile di iche iche nke metal ngwaahịa ọrụ dị ka mpempe akwụkwọ metal nhazi, cookware na ime ụlọ ịwụ ngwa oru, mgbasa ozi & ịrịba ama, ọkụ & hardware, eletriki cabinets, akpaaka akụkụ, ígwè na akụrụngwa, ezinụlọ ngwa oru, nkenke akụkụ, na na.
Tumadi etinyere nile di iche iche nke mpempe akwụkwọ metal ihe na-abụghị na kọntaktị ngwa ngwa ọnwụ, osise. na-egwu, dị ka carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara, alloy, manganese ígwè, kpaliri, aluminum, ọla kọpa na metal anwụrụ nhazi, etc
laser ike 1000W Iji 10000w (Nhọrọ)
arụ ọrụ ebe 3000 * 15000mm / 4000 * 2000mm
N'ozuzu ike oriri <18KW
Nzipu mode Gear na ogbe, Ugboro abụọ ọkwọ
Arụ ọrụ voltaji (ike ọkọnọ) 380V 50Hz (60Hz)
Previous: Echekwa Fiber Metal Laser Ịcha Machine ge-3015
Osote: Full nchọ Exchangeable Worktable GS-6015CE
1000watts Fiber Laser Ịcha Machine
Fiber Laser Ịcha 1000w